Nwunye Nandrolone Ngwunye ntụpu (862-89-5) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Nandrolone ntụ ntụ Usoro / Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ
SKU: 862-89-5. Categories: Nandrolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Nandrolone Undecanoate powder (862-89-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ, nke Dynabolon, nke o doro anya na ọ bụghị maka nchịkwa ọnụ, kama nke ahụ bụ nke na-eme ogologo oge, mmanụ a na-agbanye n'ime mmiri. Onye na-adịghị ala ala na-enye oge dị irè nke ihe dị ka atọ ruo izu anọ. Enercanoate ester bụ n'ezie otu carbon atom ogologo, na-eme ka Dynabolon dịtụ nwayọọ iji hapụ karịa Deca. Otú ọ dị, ndị na-eme egwuregwu na-atakarị ha abụọ kwa izu.
I. Nandrolone Undecanoate uzuzu uzuzu
I.Nandrolone Undecanoate powder isi agwa:
aha: Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ
Molekụla Formula: C29H46O3
Ọbara arọ: 442.6737
II. Nandrolone Undecanoate ngwakọta ntụ
Aha aha (S): Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ
2. Nandrolone Undecanoate uzuzu Uzo:
Nandrolone Undecanoate, nke a makwaara dị ka Xenical dịka Nandrolone Undecanoate aha aha maka Nandrolone Undecanoate, nke e ji mee ihe n'ịgwọ oke oke. O nwere mmetụta dị otú ahụ maka ụfụ abụba dị ka sibutramine, clenbuterol, Nandrolone Undecanoate na-egbochi ahụ gị ka ọ ghara ịmịba abụba site na nri ị na-eri. Site n'ibelata oke abụba nke na-etinye obi, Nandrolone Undecanoate nwere ike inyere gị aka ịkwụsịlata ibu karịa. N'ihi na Nandrolone Ntinro na-enyere ndị mmadụ aka ịkwụsị ya ọ ga-egbochi ọnọdụ ahụike na oke ibu na oke ibu. Ibu oke na-ejikọta ya na ọrịa 2 ụdị ọrịa shuga, ọrịa obi, ọbara mgbali elu, na ụra na-ehi ụra, nke nwere ike ịkpata nsogbu ahụike ọzọ. Ịkwụsị ibu arọ bụ otu n'ime ndụmọdụ ndị ọkachamara kachasị dị na ya mgbe ọ na-abịa n'ịdịwanye elu ahụike na ogologo oge.
Xenical (Nandrolone Undecanoate) bụ ihe enyemaka dị arọ nke enyemaka na-eri na obere kalori nri na omume dọkịta. Ọ na-enye aka ịnọgide na-enwe nrụgide mgbe ọ na-efu ọnwụ. Ọ bụ maka ndị okenye nanị. A na-eji Nandrolone Undecanoate mee ihe na ndị ọrịa nwere oke dị arọ nke nwere ike ịnwe ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọrịa obi.
Nandrolone Undecanoate nọ na otu ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi lipase. Ọ na-arụ ọrụ na eriri afọ gị, ebe ọ na-egbochi ụfọdụ n'ime abụba ị na-eri site na ịmịnye ya ma kpochapụ. A na-ewepụ abụba a na-ejighị ya ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ime ụbụrụ gị (BM).
3.What bụ usoro onunu ogwu Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ?
Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị maka ihe ga-esi na ya pụta site n'iji ụfọdụ nandrolone undecanoate powder (CAS 862-89-5) doses.Many bodybuilders na-eji steroid a mee ihe na-eme ka ịkwalite ahụ ike na ibu. ọ bụghị isi nke bodybuilder, obere Nandrolone undecanoate ntụ ntụ doses pụrụ n'ezie bara uru.
Ogburu iji 40-70mg nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ kwa ụbọchị na mgbanyụ. Maka nke a, ọ ga-adị mkpa ịṅụ otu ọgwụ kwa izu. Iji mee ka steroid dịkwuo elu, ihe ka ọtụtụ n'ime bodybuilders ga-ekewa ya n'ime 2 obere injections kwa izu.Ọrụ a ga-ebelata mkpokọta ntụtụ. Ị nwere ike ịmalite ụbụrụ gị ma ọ bụrụ na ị kwadoro 300-400mg na-enweghị nsogbu ọ bụla .Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa ka e nwee nnukwu usoro, ọ dị anyị mkpa ịmata na ọtụtụ ndị ikom ga-akwado 60mg kwa izu na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ dị mma ịrapara na 400mg . O yikarịrị ka ị ga-enweta mmetụta ndị na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị gbasaa usoro onyonyo. N'ọnọdụ ụfọdụ, mmetụta ọjọọ nwere ike ịpụta mmetụta dị mma, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị iche na otu onye gaa na onye ọzọ.
4.How Nandrolone Undecanoate uzuzu na-arụ ọrụ?
Mmetụta nke Nandrolone undecanoate powder (CAS 862-89-5) na anabolism bụ isi mee ka a lelee steroid a dịka onye na-elekọta ndị na-egbu oge na-enweghị oge ọ bụla ọzọ. O doro anya na nke a bụ otu n'ime ọdụdụ kachasị mma n'elu ụwa, ma uru ọ bara maka mmelite egwuregwu nwere ike bụrụ ihe bara uru niile. Na hormones Nandrolone bụ ndị na-ewu ewu n'etiti ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu, gụnyere ndị na-enweghị ọchịchọ maka ọkpụkpọ anụ ọ bụla ekwupụtara. Nke a bụ n'ihi mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ na ọgwụ ndị ọzọ na Nandrolone bụ otu n'ime ihe kacha mma maka nkwado enwekwu na muscular ntachi obi na mgbake; mgbake bụ ebe ọ na-enwu gbaa n'ezie. N'ihi mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ, ị gaghị ada mbà ngwa ngwa; akwara gị ga-enwe ike ịrụ ọrụ kachasị elu maka ogologo oge n'ime nrụgide. Mgbe ahụ, anyị nwere ọgwụgwọ, na ọzụzụ siri ike na arụmọrụ nwere ike ime ka ahụ nwụọ. Mgbe a gwọrọ anyị ngwa ngwa, na nke a, anyị na-ekwu maka ezi ọgwụgwọ, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ọkwa dị elu karị. Ọzọkwa, mgbe a bịara n'ịgwọ ọrịa bụ ebe enwere ọganihu. Agaghị enwe ọganihu mgbe anyị na-azụ. Ọzụzụ na-agbaji ahụ anụ ahụ, ma ọgwụgwọ bụ ihe na-eme ka ọ dị ike na ihe na-eme ka o too. N'agbanyeghị ihe ị chọrọ iji mee ihe, mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ na nkwonkwo obi na mgbake ga-enwe mmasị site na ndị niile na-agbakwụnye na steroid a anabolic.
Ọ bụ ezie na ọ bara uru ịrụ ọrụ n'ozuzu dịka akọwara ya, ọ dịghị onye nwere ike ịgọnahụ mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ na-eche na ịkwado anụ ahụ abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe dị ịtụnanya. Onye na-agwọ ọrịa a agaghị akwalite uru ngwa ngwa, ma nwee calorie buru ibu, ọ ga-akwalite uru dị ukwuu na ntanye ahụ. Ụfọdụ arọ nwere ike ibu ibu mmiri, mana a ga-ejikwa ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. More na nke a mgbe anyị lere anya n'akụkụ mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ. Dịka onye na-akwalite nkwalite ukwu nke oke, mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ na nke a kwesịrị ịdị mfe ijide na tụnyere ọtụtụ steroid nke anabolic mgbe ejiri ya emebie. Onye ahu kwesiri ichoputa na o nweghi uru abuba mgbe o jiri oge ozo mee ihe n'ihi onu ogugu nke metabolic. Nke a apụtaghị na ị gaghị enweta abụba mgbe ị na-agafe, oge uto na-achọ ka calorie ndị kafe, ma ị ga-enwe ike ịmezi nri gị.
Mmetụta nke Nandrolone undecanoate ntụ ntụ pụkwara ịba uru n'oge mgbanwụ. Nke a na-esiri ọtụtụ ndị ike imechi isi ha ka steroid agaghị akwalite mmetụta siri ike dị ka Trenbolone ma ọ bụ Winstrol. Otú ọ dị, ọ bụ ezigbo anụ ahụ na-echekwa anụ ahụ, ma dịka anụ ahụ na-esi ike na-adị mgbe ọ bụla n'ihe ize ndụ mgbe ọ dị na calorie deficit, nke dị mkpa maka ọnwụ, nke a nwere ike ime Nandrolone uru. N'ihi nhụjuanya a na-enwe site na nandrolone undecanoate ntụ ntụ, onye ahụ ga-enwe ike ịnọgide na-enwe ume mgbe ọ na-abụ oge mmepe ume nke ọzụzụ. Akụkụ nke mgbake ga-abakwa uru dị ukwuu dị ka mgbake na-esikarị na-esikwu ike karị n'oge ụkọ calorie.
Ị nwere ike ịzụta Nandrolone undecanoate ntụ ntụ online ma ọ bụrụ na ịchọta ihe dị larịị ụlọ ntanye ụlọ na-eburu ya, mana ọzọ ọ bụghị ihe nkịtị. Na Nandrolone Decanoate na Nandrolone Phenylpropionate dị, ị ka ga-enwe ike ịzụta niile Nandrolone ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụta Nandrolone undecanoate ntụ ntụ na weebụ, buru n'uche na ọ dịghị ụzọ ị ga-esi chọpụta àgwà nke steroid a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bi na US, ị ga - agba iwu. Na United States anabolic androgenic steroid dị iche iche dị ka Usoro nke III na-achịkwa bekee. Ịzụta ma ọ bụ ikike nke steroid ọ bụla nwere ike ịchọrọ ọgwụ ederede dabara adaba maka mkpa ahụike gọọmentị dị mma ka ị bụrụ iwu. Ọ bụ ezie na a pụrụ inweta ọgwụ ndị steroid, ị gaghị enweta ọgwụ maka Nandrolone undecanoate ntụ ntụ ma ọ bụ Nandrolone undecanoate ntụ ntụ. Otú ọ dị, ị ga-achọpụta na iwu na-adịkarị mfe karị n'ọtụtụ mba. Na mba ụfọdụ, ị nwere ike ịzụta steroid maka anaboliki maka iwu onwe gị ma ọ bụrụhaala na azụrụ ya na ọgwụ. N'aka nke ozo, mba ufodu di n 'aka nkpa ka US na-eme ka iwu doo anya dika o gbasara ebe i bi di nkpa tupu gi azuta steroid.
N'ihi iwu steroid nke United States na ebe ndị ọzọ dị gburugburu ụwa, iji zere nsogbu iwu na ịzụta ihe ahịa dị ala ị na-agba ume ịga leta ndị na-akwado ndị a na Steroid.com. Ndị na-akwado ndị a na Steroid.com nwere ike inye gị iwu anabolic dị elu na-enweghị iwu ma ọ bụ egwu egwu.
7.Nandrolone Undecanoate Ntụziaka ntụ ntụ ntụ ntụ:
8.Nandrolone Undecanoate ugbo Marketing:
9.Does Nandrolone Undecanoate uzuzu enwere ihe obula?
Nandrolone undecanoate ntụ ntụ nwere mmetụta dị nro maka mgbanwe nke estrogen, echere na ọ bụ nanị banyere 20% nke ahụrụ na testosterone.491 Nke a bụ n'ihi na ebe imeju nwere ike ịtụgharị nandrolone ka ọ bụrụ estradiol, na ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke steroid aromatization dịka nandrolone anụ ahụ. enweghi ike imeghe usoro a .492 N'ihi ya, mmetụta ndị dị na estrogenelated bụ nchegbu dị ala karị na ọgwụ a karịa na testosterone. A pụrụ ịhụ ọkwa dị elu nke estrogen ahụ dị elu, ma ọ nwere ike ịkpata mmetụta ndị dị ka mmụba mmiri, uru anụ ahụ na gynecomastia. Akwukwo estrogen dị ka clomiphene citrate ma ọ bụ citoxifen citrate nwere ike ịdị mkpa iji gbochie mmetụta nke estrogenic ma ọ bụrụ na ha emee. Otu nwere ike iji ogwu aromatase dịka Arimidex® (anastrozole), nke na-ejikwa njikwa estrogen mee ihe n'ụzọ dị irè site na igbochi nchịkọta ya. Ndị na-emepụta ihe nwere ike ịdị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere ọgwụ estrogens, Otú ọ dị, ọ pụkwara inwe mmetụta ọjọọ na ọbara lipids.It bu ihe edere na nandrolone nwere ihe omume dika progestin na body.493 Ọ bụ ezie na progesterone bụ c-19 steroid, iwepụ nke otu a dịka na 19-norprogesterone na-emepụta hormone nwere njikọ dị ukwuu maka njikọta ya. Ikekọrịta àgwà a, ọtụtụ ndị 19 - ma ọ bụ ndị na-arịa ụbụrụ anabolic na egosiri na ha nwere njikọ ụfọdụ maka onye ntanetịnta ahụ.494 Ihe mmetụta ndị metụtara na progesterone yiri nke nke estrogen, tinyere nkwụsị nzaghachi nchịkwa nke mmepụta testosterone na ọnụego abụba dị elu .Progestins na - emekwa ka mmetụta nke stimulus nke estrogens na mammary anụ ahụ ibu. O yiri ka enwere mmekọrịta siri ike n'etiti hormonụ abụọ a ebe a, nke mere na gynecomastia nwere ike ime ya na enyemaka nke ndị na-emepụta ihe, na-enweghi ogo nke estrogen. Ojiji nke antiestrogen, nke na - egbochi akụkụ estrogenic nke nsogbu a, bụ mgbe zuru oke iji mebie gynecomastia kpatara nandrolone.
III. Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ maka ire ere HNMR
IV. Esi zụta Nandrolone Undecanoate uzuzu (CAS 862-89-5) site na aasraw?
Kedu ihe nandrolone ntụ ntụ ji / nandrolone uru? Kedu ihe eji eji ọgwụ nandrolone eme ihe? Nandrolone Decanoate ntụ ntụ na Nandrolone phenylpropionate powde
1 nyochaa maka Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ